Kooxo Hubeysan Oo Dad Ku Dilay Magaalada Muqdisho. – STAR FM SOMALIA
Faah faahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya kooxo ku hubeysnaa Bastoolad oo daqiiqado kahor afar qof ku dilay gudaha degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir, waxaana goobta ka baxsaday raggii ka dambeeyay falkaas.
Dad Goobjoogayaal ah ayaa waxaa ay ku warrameen in rag watay Bastoolado ay Afarta ruux ku dileen hal goob ay ku sugnaayeen, iyagoona u geeriyooday dhowr xabbadood oo qeybaha sare ee jirka looga dhuftay.
Warar la helayo ayaa sheegaya in ragga la dilay 2 kamid ah ay ahaayeen shacab, halka labada kale ay ahaayeen Askar ka tirsan Ciidanka dowladda Federaalka Soomaaliya, in kastoo la tilmaamay in xiligaas aysan wadan hub.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka ayaa sida caadada aheyd gaaray goobta uu falka ka dhacay, iyagoona goobta ka qaaday Meydadka afarta ruux ee lagu dilay degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir.
Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhaca dilal qorsheysan oo geystaan rag dhalinyaro ah oo ku hubeysan Bastoolado, waxaana inta badan falalkaas mas’uuliyadooda sheegta Al-shabaab.